Zuckerberg रिमोट क्षेत्रमा लागि वाइफाइ drones काम गर्दछ - समाचार नियम
Zuckerberg रिमोट क्षेत्रमा लागि वाइफाइ drones काम गर्दछ
FACEBOOK सीईओ मार्क Zuckerberg drones प्रयोग रिमोट समुदायहरूलाई इन्टरनेट ल्याउन योजना उल्लिखित छ.
आफ्नो गैर लाभ internet.org संगठनको auspices अन्तर्गत, Zuckerberg उहाँले साथ सहयोगी छ प्रकट नासा एम्स अनुसन्धान केन्द्र र बेलायत ड्रोन कम्पनी Ascenta को आकास बाट वाइफाइ बीम गर्न सौर अमानवचलित विमान अग्रगामी सेवा गर्न.
विचार गर्ने शंकास्पद शीर्षक अन्तर्गत बेलुन मार्फत इन्टरनेट पहुँच छुटाउन इन्टरनेट खोज विशाल गुगलको योजना समानताहरु छ “परियोजना Loon”.
यो पहिले नै टाइकुन संग $ 2bn भर्चुअल वास्तविकता हेडसेट कम्पनी Oculus VR लागि जानेबेलामा पछि फेसबुकमा व्यस्त हप्ता भएको छ. कदम मानिसहरूले उहाँको मनसाय सोधपुछ देखि एक backlash प्राप्त गरेको छ र यसलाई उहाँले मानिसहरूको मुख मा एक अधिक सकारात्मक स्वाद छोडेर हप्ताको अन्त गर्न रोज्नु भएको छ कि जस्तो थियो.
यस ड्रोन वाइफाइ योजना को रोलआउट लागि एक विचार खर्च गरिनेछ, र विश्वविद्यालय शेफिल्ड को ईन्जिनियरहरु 3D मुद्रित विमान मा जवाफ पाएका सक्छ.
उन्नत विनिर्माण अनुसन्धान केन्द्र (AMRC) विश्वविद्यालय शेफिल्ड को मा एक को एक 1.5M व्यापक प्रोटोटाइप निर्माण गरेको छ अमानवचलित हवाई वाहन (UAV), 2KG अन्तर्गत वजन र thermoplastics देखि निर्माण.
वर्तमान मा ड्रोन मात्र एक ग्लाइडर रूपमा प्रयोग गरिएको छ, तर थप 3D मुद्रित भागहरु र सस्तो इलेक्ट्रनिक घटक को संयोजन संग, को UAV एक सस्तो हुन सक्छ, युद्ध क्षेत्र मा गिर लागि परिवहन आदर्श को disposible फारम, आणविक hotzones र अन्य पुग्न गाह्रो वा शत्रुतापूर्ण वातावरणमा.
वैकल्पिक यसलाई आफ्नो ड्रोन वाइफाइ नेटवर्क लागि internet.org गरेको उच्च महत्वाकांक्षा ल्याइने को एक आदर्श तरिका लागि बनाउन सक्छ.
यो लेख, Zuckerberg रिमोट क्षेत्रमा लागि वाइफाइ drones काम गर्दछ, बाट सिन्डिकेट छ यो इन्क्वायरर र अनुमति यहाँ पोस्ट.
20662	1 फेसबुक, गुगल, मार्क जुकरबर्ग, वाइफाइ
← मैवरिक्स ओएस पहिले नै चलिरहेको 40 एप्पल Macs प्रतिशत उत्तर कोरिया नयाँ आणविक परीक्षण बाहिर शासन गर्न भाकल →